Akụkọ - Nleba anya na nrụzi nke mgbanwe mgbanwe
Nleba anya na nrụzi transformer
Banyere mmanụ mgbanwe
Kedu ọrụ mmanụ ngbanwe nke mmanụ
Njirimara Mmanụ Transformer
Mkpebi nke àgwà mmanụ ngbanwe
Akpachara anya maka ojiji nke ngbanwe
Nyocha maka ihe kpatara mgbapu mmanụ na Transformer
Otu esi achọta ntapu
Usoro nkwalite mwụfu mmanụ
Usoro mgbochi maka ntapu mmanụ
Nhazi nke ntanye mmanụ transformer
Ihe egwu dị na mgbapu mmanụ transformer
Banyere nhazi na ụkpụrụ nke transformer
Olee otú Transformers si arụ ọrụ
Isi ihe na ọrụ nke transformers
Ebumnuche nke transformer
Ụdị ntụgharị na njirimara
A na-etinye transformer n'ọrụ
Akpachara anya maka nchekwa
Kedu ihe dị iche n'etiti ihe ngbanwe ụdị mmanụ na ihe ntụgharị ụdị nkụ?
Iji hụ na ọrụ nke transformer na-arụ ọrụ, ọ dị mkpa ka a na-enyocha ya mgbe niile ma na-echekwa ya.
1 Ekwesịrị ilebara uru ngosi okpomọkụ nke onye na-ahụ maka okpomọkụ anya ugboro ugboro, a ga-achọpụta ọrụ nke transformer n'oge, ma ṅaa ntị ma ọ dị ụda na-adịghị mma na ịma jijiji.
2 Mgbe ibu nke okpukpu atọ nke transformer na-adịghị mma, a ghaghị ileba anya ugbu a nke oge kachasị elu na okpomọkụ nke oge kachasị elu.Oke kacha mma na-anọpụ iche nke transformer ejikọrọ na Yyn0 bụ 25% nke obere voltaji ugbu a.Oke nnọpụiche kacha ugbu a nke onye ntụgharị Dyn11 na-ekwe nwere ike ịbụ otu ahịrị dị ugbu a.
3 Mgbe transformer nwere ọnọdụ ndị a, dị ka arụrụ ọrụ na-adịghị mma nke fan;ngosipụta okpomọkụ na-adịghị mma;obere mgbawa n'ọdịdị nke mkpuchi resin winding, wdg, a naghị ekwe ka ọ gafee akara aha.Chọpụta ihe kpatara ya ma ọ bụ kpọtụrụ onye nrụpụta maka nkwenye.
4 N'ozuzu akọrọ na ebe dị ọcha, lelee otu ugboro n'afọ ma ọ bụ ntakịrị karịa;N'ebe ndị ọzọ, dị ka ịgba ọsọ n'ikuku uzuzu ma ọ bụ ikuku, lelee kwa ọnwa atọ ruo isii.N'ebe ndị emetọchara nke ukwuu, a ga-emerịrị nyocha nleba anya n'ịrụ ọkụ ọkụ kwa ọnwa.
5 Mgbe a na-enyocha ya, ọ bụrụ na achọpụtara nnukwu uzuzu uzuzu, a ga-ewepụrịrị ya iji hụ na ikuku na-ekesa ma gbochie ndakpọ mkpuchi, mana a gaghị eji ihe nhicha na-agbanwe agbanwe.Ikuku a kpakọbara na-ebupụ uzuzu nke ikuku ventilashị.Ntughari nke ikuku abịakọrọ na-emegide nke ikuku jụrụ oyi mgbe onye ntụgharị na-arụ ọrụ.
6 Lelee ma ihe nkedo na njikọ ndị a tọhapụrụ, ma akụkụ ndị na-eduzi na akụkụ ndị ọzọ nwere nchara na corrosion, ma hụkwa ma enwere akara carbonization na corrosion eletrik na elu mkpuchi.Ọ bụrụ na achọta ya, mee ihe kwesịrị ekwesị iji nagide ya.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara transformer, ị nwere ike ịlele akụkọ a:Akpachara anya maka nchekwa
Oge nzipu: Jan-20-2022